‘स्वतन्त्र मधेस’ को सुखद् अन्त्य: सीके राउतले ‘मधेस’ छाडे,औपचारिक रूपमा अलग बाटो तय - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । सरकारसंग ११ बुँदे सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएको सिके राउतको पार्टी (स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन) को नाम परिवर्तन भएको छ । सिराहामा सम्पन राष्ट्रिय परिषद बैठकले राउत नेतृत्वको पार्टीको नाम ‘जनमत पार्टी’ राख्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले सरकारसँग भएको ११ बुँदे सहमतिलाई स्वागत गर्दै ‘ऐतिहासिक तथा मधेसी जनताका लागि अभूतपूर्व’ सहमति भनेको छ । उसले स्वतन्त्र मधेसका साथै जनमत संग्रहको मागसमेत परित्याग गरेको छ । लाहानमा सम्पन्न दुई दिने बैठकले जनमत पार्टीको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिसमेत निर्माण गरेको छ । पार्टीको अध्यक्षमा डा. सिके राउत रहेका छन् भने ३४ जना सदस्य छन् । राष्ट्रिय परिषद बैठकले सिके राउतको नेतृत्वमै ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति चयन गरेको हो ।
परिवर्तित पार्टीको झण्डामा क्रमशः रातो, सेतो र हरियो रंगको ठाडो धर्काको बीचमासेतो स्ट्रीपमा रातो रंगको अष्टदल राखिनेछ । उक्त पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि अष्टदल नै राखिने निर्णय गरिएको छ । पार्टी दर्ताका निम्ति निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने निर्णय पनि गरिएको छ । जनमत पार्टीको गठनसँगै जनमत जुटाउन जनतासमक्ष जाने र जनमतबाटै संवैधानिकै रुपमा जनताको समस्या, माग, हकहित र अधिकारका लागि अनवरत समर्पित र निःस्वार्थ भावले संघर्ष गर्ने प्रतिवद्धता बैठकले गरेको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल खानले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन् ।
सिरहाको लहानस्थित मारबाडी सेवा सदनमा आइतबारदेखि शुरु भएको बैठकमा कार्यकर्तालाई मोवाइल बोक्न निषेध गरिएको थियो । बैठक अवधिभर खाने, बस्ने व्यवस्था सेवासदनभित्रै गरिएको थियो । बैठकले कार्यकर्तालाई नागरिकता बोक्न लगाइएका कारण पार्टी दर्ताका निम्ति रहेको ती पार्टीका कार्यकर्ताहरुले बताएका छन् ।
यस्ता छन् नयाँ पार्टीको निर्णय ।
बैठकले जनताको हक र अधिकारका लागि संघर्ष गर्न भन्दै नेपालको संविधानभित्रै रहेर पार्टी स्थापना गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रहरी हिरासतमा मारिएका बाँकेका जिल्ला संयोजक राम मनोहर यादवको परिवारलाई सरकारसँगको सहमतिअनुसार क्षतिपूर्ती तथा परिवारका एक जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन पहल गर्न समितिलाई नै जिम्मेबारी दिइएको छ
सिके राउतको पार्टीले स्वतन्त्र मधेसको नारा र नाममात्रै होइन, यसअघि उठाउँदै आएको जनमत संग्रहको माग पनि छाडेको छ । बैठकको निर्णयमा कहीँ पनि जनमत संग्रहको माग उठाइएको छैन ।
पार्टीको निर्णय हेर्दाखेरि अब स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँगै पृथकतावादी मागको औपचारिकरुपमा पटाक्षेप भएको छ ।
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र नेपाल सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै गठबन्धनका समर्थकहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु अबिलम्ब फिर्ता लिनका लागि छिटो पहल गर्ने निर्णय गर्दै चन्दन सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सहमति कार्यान्वयन मिति बनाइएको सो पार्टीले जनाएको छ ।
काठमाडौ । काँग्रेस सांसदले संसदमा बोल्न नदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज विशेष पत्रकार सम्मेलनमार्फत […]
एकीकृत जनमत पाएको सरकार किन ‘सिंगल-सिंगल’ भिड्न खोज्दै छ?
काठमाडौं । सरकारले २७ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका मुख्यतः तीन […]
होसियार ! ‘मुख थुन्ने कानुन बन्दैछ,अब सरकारका अरिंगाल मात्र सुरक्षित हुन्छन्'(भिडीयो )
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याइरहेका विधेयकहरु, […]
कांग्रेस कलह : देउवा सहभागी हुने कार्यक्रम केसी र महतद्वारा बहिष्कार
काठमाडौं । पहिल्लो समय कांग्रेस र कलह एक–अर्काका पर्यायबाची जस्तै बनेका छन् । अहिले पछिल्लोपल्ट नुवाकोट […]
राज्यब्यवस्था समितिको निर्देशनले रोकिएन युवा आकर्षण : एक लाख १८ हजार बढीले दिए लोकसेवामा आवेदन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि […]
नेकपा नेता एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलको निधन
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का केन्द्रिय कमिटी सदस्य तथा पूर्वशिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलको […]